Ngaba ucinga ngokuthengisa iMacBook Pro yakho ngeTouch Bar? UApple ucebisa eli nyathelo langaphambili | Ndisuka mac
Ngaba ucinga ngokuthengisa iMacBook Pro yakho ngeTouch Bar? UApple ucebisa eli nyathelo langaphambili
Ukuba unayo iMacBook Pro ukusukela ngo-2016 ukubheka phambili kwaye uneTouch Bar, iMac yakho ayinayo iprosesa enye, kodwa zimbini. Ewe, iBar yeTouch ubuncinci kwiimodeli zika-2016 kunye no-2017 (siza kubona ukuba kwenzeka ntoni kwixa elizayo) ine-chip eyahlukileyo kwi-chip esembindini yeMac yakho.Ngesizathu, amanyathelo esihlala siwathatha xa sithengisa okanye sithumela izixhobo zetekhnoloji kwaye Ngokucacileyo sifuna ukuba singashiyi umkhondo kuthi naphi na, ngeli xesha akonelanga ukucima ngokupheleleyo i-hard drive. UApple ucebisa ukuba wenze oku kulandelayo.
Ke ngoko, njengoko iTouch Bar iqokelela ulwazi, Kuya kufuneka senze ezinye izinto kwisiphelo sendlela, ukuqinisekisa ukuba ulwazi lobuqu aluhambi kwiqela lethu elidala. Ngokomgaqo, le datha igcinwa ngokukhuselekileyo kwi Enclave ekhuselekileyo. Ukuba ufuna ulwazi kwiphepha le-Apple malunga nendlela yokucima ulwazi kwi-Bar Bar, awuyi kufumana ngaphezulu kwesinye isikhokelo ukusebenzisa ibar yeApple. Endaweni yoko, unokuhlala usiya kwisikhokelo inkxaso isimema ukuba sithathe amanyathelo ambalwa kwisiphelo sendlela kwaye ucime ulwazi kwiTouch Bar. Ukwenza oku, kuya kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo:
Ungasula naluphi na ulwazi olugcinwe yiTouch Bar ngaphambi kokuthengisa okanye ukunika iMacBook Pro yakho.
Okokuqala, qala kwi-MacOS Recovery: Cinezela kwaye ubambe i-Command-R kwikhibhodi yakho kwangoko emva kokucinezela iqhosha lamandla ukuvula iMac yakho, okanye kwangoko emva kokuba iMac yakho iqalele kwakhona.
Xa iwindow ye-MacOS Utility ibonakala, khetha Izixhobo> Isiphelo sendlela kwimenyu yebar. Chwetheza lo myalelo kwiXesha: xartutil --erase-all
Cinezela i-ESC, chwetheza u-Ewe, xa ubuzwa ukuba uqinisekile, kwaye ucinezele i-ESC kwakhona. Okokugqibela, khetha iTheminali> Indawo yokuphuma kwaye uqhubekele kwinqanaba elilandelayo.
Ukuba uthengisile iMacBook Pro yakho ngeTouch Bar kwaye awukenzi la manyathelo, akukho nto ifanele yenzeke, kodwa ayonzakalisi ukwenza njalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Ngaba ucinga ngokuthengisa iMacBook Pro yakho ngeTouch Bar? UApple ucebisa eli nyathelo langaphambili
I-Apple ihlawule malunga nokuhlala eSweden